Nairobi (Caasimada Online) – Haween ka tirsan Soomaalida Kenya oo muddo ka tirsaneyd kooxda Al-Shabaab ayaa ka sheekeysay qiso yaab leh oo qabsatay intii ay
Muqdisho-(Caasimadda Online): Wararka Muqdisho ka imaanaya waxey sheegayaan inaan weli la aasin xildhibaan Madoobe Cabdi Guuleed oo ay shalay Muqdisho ku dileen ilaalo la socotay Xildhibaan Maxamuud Abuukaate oo Baarlamanka ...
Dowladda Somalia oo dib u saxday qaladaadki ku jiray warbixintii Qaraxii Zoobe
Wasaaradda Amniga ee Dowladda Somalia ayaa saxday xog qaldan oo ay baahisay 14kii bishaan oo la xiriirtay Qaraxii ay dadka badan ku dhinteen ee Zoobe, labo ka mid ah shaqaalaha ...
Waxaa magaalada Muqdisho xalay lagu qabtay madal looga hadlayey Isirka Soomaalida, xarunta dhaqanka ee Ifiye oo soo qabanqaabisay kulankan, waxaa marti ku ahaa Prof. Maxamed Gaandi oo ah qoraa taariikhda ...
Akhriso: Miisaaniyadda 2018, canshuuraha iyo deeqaha laga filayo Turkiga, Sacuudiga iyo Qatar
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ah Xil. Dr. Cabdiraxman Ducaale Beyle ayaa maanta golaha shacabka hor-geeyay miisaaniyadda 2018-ka. Miisaaniyadda 2017-ka waxaa ay aheyd $245.9 Milyan balse middan ...
Beesha caalamka oo Turkey iyo Somalia u xagagelineysa
Somalia dawladihii deriska la ahaa ee horteed burburay, isla markaana kasoo kabsaday burburkoodii waxa ka mid ahaa Tanzania, Uganda iyo Ethiopia. Dawladahaas midoodna beel caalam umasoo gurman, dastuurana umay samayn, doorashooyin ...
Madaxda maaamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayuu isbuuc ku dhowaad shir uga socdaa Muqdisho. Kullanka waxaa diiradda lagu saarayaa qodobo dhowr ah, mana jiro go’aan ka soo baxay ama ...
Qaraxii 14kii bishan ka dhacay isgoyska Zoobe waxaa uu dhibaateeyay qoysas badan oo Soomaali ah, qoysaskaas oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba waxaan warbixintan ku dadkii wax ...
Doha (Caasimada Online) – Rasuulka SCW ayaa sheegay inuu dadka ugu khayr badan yahay Qofka Barta Qur’aanka ee Hadana dadka Barra, Hadaba Bal Qiysaas Qiimaha iyo Darajada uu Alle agtiisa ...